Duqa Muqdisho Enj Yariisow oo u muuqda mid mari doono wadadii uu maray Taabid Cabdi, Halistii ugu horeysay kursigiisa oo cagta saaray | Newsomali
Duqa Muqdisho Enj Yariisow oo u muuqda mid mari doono wadadii uu maray Taabid Cabdi, Halistii ugu horeysay kursigiisa oo cagta saaray
Ka hadalka Maqaamka Magaalada Muqdisho waxay noqotay sun halis badan oo qofkii arrintan ka hadlaba cimrigiisa soo gaabanayo ama xilkiisa siyaasadeed ku weynayo.
In kastoo Maqaamka Magaalada Dastuurka ku qoran yahay iyo nooca uu noqon doona weli la isku raacin hadana in laga hadlo maqaamka iyo muqdisho metelaad ku yeelato aqalka sare ayaa ah mid had iyo jeer la siyaasadeeyo oo dhinacyo badan dowladda ay ka mid tahay u arkaan xilligan mid halis gelinayo Maamulkooda.
Federaalka dhib ayay ku tahay waqtigan Magaalada keliya ee ay maamulan in maqaam gaar ah yeelato, qaar ka mid ah Maamul Goboleedyada dalka iyagana arrimo siyaasadeed ayay arrinta muqdisho ku diidan yihiin.
Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya iyo Wasiirkiisa koowaad Xasan Cali Kheyre xilligan halis qatar ku ah awoodooda maamul ayay u arkaan haddii muqdisho maqaam gaar ah xilligan loo sameeyo.
Ra’iisal Wasaare Kheyre oo ka soo jeeda degaanka Muqdisho waa fahamsan yahay culeyska ay leedahay arrintan iyo cabashada dadka degaanka hase yeeshe waxaa uu aaminsan yahay in wax walba ay ku xiran yihiin dastuurka oo la soo dhameystira iyo biseel Siyaasadeed, wax walbana waqtigooda la gaari doono.
Kuma dhiiran karaan xilligan in Muqdisho gole degaan sameysato, doorashana ku yimaada maamulka Gobolka, haddii taasi dhacda waxaa xaqiiq ah in ay lumin doonaan awood dhaqaale iyo mid siyaasadeed maadama Federaalka isha keliya ee ay ku nool yihiin tahay muqdisho.
Si kastaba Haddii shalay Taabid sababsaday maqaamka muqdisho Eng Yariisow wadadii seefta ku qaadi lahayd ayuu shalay cagta saaray markii uu khudbad u jeediyay labada aqal ku dalbaday in la dedejiyo maqaamka caasimada.
Dhinaca kale dadka degaanka waxay u arkaan qofkii si adag uga hadla arrinta maqaamka magaalada Muqdisho inuu yahay nin raacay wadadii saxda ahayd ee xuquuqda ka maqan ugu doodayo, aad ayayna ugu sacab tumaan laakiin kama difaacan marka ay halis ku timaado kursigiisa, waana mida sababtay xaqiiqdii in Taabid oo markii hore xulufo la ahaa Madaxweyne Farmaajo deg deg kursigiisa ku waayay.
Dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay leeyihiin Yariisow waxaa uu qaatay halis iyo xasilooni daro siyaasadeed oo 6 da bilood ugu horeysa sababi karta in laga fikiro sidii xilka looga qaadi lahaa.